EyoMdumba. Ukukhethwa kwezinto ezintsha | Uncwadi lwangoku
Fe bruwari izisa iindaba ezininzi zomhleli. Le yenye ukhetho of 6 izihloko ukuba basayine amagama ngeSpanish kunye predominance ababhali abachaphazelekayo panorama ezifana Eva Garcia Saenz de Urturi, u-Ines Martin Rodrigo (ophumeleleyo kutshanje weMbasa yeNadal) okanye UAna Lena Rivera, ngenoveli yakhe yesine ethi… sele ndiyifundile. Ndikwaqaqambisa UMiriam Imedio y Afrika Vazquez Beltran. Kwaye, ekugqibeleni, umbhali uyachwechwa, UDaniel Fopiano. Sijonga.
1 Incwadi emnyama yeeyure - uEva García Sáenz de Urturi
2 Intliziyo yabarhaxwayo - uDaniel Fopiani
3 Iintlobo zothando - Inés Martín Rodrigo
4 Esona siqithi sikude emhlabeni - iMyriam Imedio
5 Ukuthula kweBerlin-Afrika Vázquez Beltrán
6 Iindlalifa zeMvumi - uAna Lena Rivera
Incwadi emnyama yeeyure - Eva Garcia Saenz de Urturi
Inoveli elandelayo ngumbhali ophumeleleyo waseVitoria, ophumelele ibhaso lePlaneta ngo-2020 I-Aquitaine, kwaye ekugqibeleni iphuma kule nyanga. Ibali elitsha le inqumle emnyama isinika iphazili enomdla kakhulu.
Singaphakathi Vitoria ngoku 2022. I owayesakuba ngumhloli u-Unai López de Ayala -kwaye yazi njengoko Kraken- ufumana a umnxeba igama eliya kutshintsha into ocinga ukuba uyazi malunga nexesha elidlulileyo losapho lwakho: uneveki enye yokufumana incwadi emnyama yeeyure ezidumileyo, ilitye elinqabileyo lebhayibhilografi. Ukuba awukwenzi, eyakho i-madre, ehlala emangcwabeni amashumi eminyaka, uya kufa. Le yindlela umntu aqala ngayo uhlanga ngokuchasene nexesha phakathi kweVitoria kunye neyona bibliophile yaseMadrid ukuzama ukulandelela eyona profayile yolwaphulo-mthetho ajongene nayo, ekubeni ekwazi ukuguqula ixesha elidlulileyo.
Intliziyo yabarhaxwayo — UDaniel Fopiani
Cadiz, Umbutho weMarine Corps kunye nombhali. Ukuqhubeka kukaFopiani akubonakali kubi kwaphela kwaye kubandakanya amabhaso ahlukeneyo asele ekwikhondo lakhe lokubhala elifana IValencia Nova yoMbali ngo-2017 ngenoveli yakhe umsundululu, okanye isikhundla sakho sokugqibela kwi ICartagena emnyama 2020 kunye Uncuthu lwengoma yobumnyama. Ukwabhalela imagazini yakwa-Zenda ngokukhutheleyo.
Le noveli intsha idlala indima enkulu kwi USjini uJulia Cervantes, nayo Infante de Marina, kwaye yenzeke kwisiqithi sase Alboran, apho kuphela ibutho elincinane loMkhosi waManzi waseSpeyin kunye nesazi sebhayoloji saseJunta de Andalucía sihlala. Xa kumangcwaba amancinci kubonakala intloko eyonakeleyo bemvelaphi yaseAfrika, ejikelezwe ngamangabangaba anqunyulwe iintloko kunye neentloko zedoli ye-porcelain endaweni yazo, baya kuthumela i-Sgt ukuba iqhube uphando.
UJulia Cervantes unalo kuphela kunyana wakhe uMario nonina kwaye uphila uphawu lokufa komyeni wakhe. Ngoko ngexesha elibi Ingxaki, hlalani ngokupheleleyo incommunicado ngaphandle kunye nenkqubo yeentetho zoluntu kwilighthouse baqala ukuva a lullaby engaqhelekanga: “Amajoni amancinane alishumi aya esidlweni; omnye wafuthaniselwa, kwasala abasithoba.” Ukususela ngoko, i ukubulala kwaye uloyiko luthimba isiqithi. UJulia uya kuzama ukufumana enetyala ukuba akwaziwa ukuba wayesele esesiqithini okanye ephakathi kwamaqabane akhe.
iintlobo zothando — Ines Martin Rodrigo
Ifike kwiivenkile zeencwadi mva nje Ibhaso leNadal kwiNoveli yowama-2022 iphumelele ngu-Inés Martín Rodrigo, waseMadrid, uthathwa njengenye yeentatheli eziphambili zenkcubeko kweli lizwe.
ebusweni obungalindelekanga Ukufa kukayisemkhulu nomakhulu wakhe uCarmen noTomás, uNoray uvakalelwa kukuba xa ubomi buye baphela ngequbuliso, lixesha lokukhumbula. Engakwazi ukoyisa ukungabikho kwabo bamfundisa iintlobo ezininzi zothando, uzivalela ngaphakathi ikhaya losapho wedolophu, apho akhulele khona kwaye onwabile. Apho uthatha isigqibo sokujongana inoveli ukuba ebehlehlisile iminyaka: imbali yosapho lwakhe, kunye nelizwe eloyika kakhulu ixesha elidlulileyo, ukusuka kwimfazwe yamakhaya ukuya ekuhlanganiseni idemokhrasi. Ukuchwetheza uNoray iya kuvusa ubomi kwabo bamenze waba nako kwaye uya kujongana noloyiko lwakhe olubi kunye neziporho. Kodwa engazi kuye, ibali lakhe liza kufika ezandleni zika Ismael, uthando lobomi bakhe, ngubani oza kufunda, kwigumbi lasesibhedlele, amaphepha ebali anesiphelo esinokuphawula ikamva labo.
Esona siqithi sithe qelele ehlabathini - UMiriam Imedio
Umbhali uthi ngale noveli «kukho iprojekthi eyimfihlo kunye nogqatso oluchasene nexesha lokufumana inyaniso. Kodwa ayisiyiyo loo nto kuphela, kukho nolwandle olungalawulekiyo olunamaza achasene neemvakalelo, izibuko ezingabonakalisi ubunyani kunye ne-protagonist eya kuba sisilwanyana esilambele iimpendulo.
Iinkwenkwezi ULisa waseFez, eyi isazi ngengqondo owathi, ngenxa yeempawu zakhe, wanyulwa ukuba athathe inxaxheba ku iprojekthi eyimfihlo enokuguqula uhlalutyo lwengqondo yomntu. Kodwa oko kwakunjalo ngaphambili umfazi ongaqondakaliyo wazibulala phambi kwakhe ebhasini kwaye ubomi bakhe buya kutshintsha ngonaphakade. Ngoku uqinisekile ukuba iphupha elibi ukuba usandula ukuyiqala inxulumene naloo projekthi, kodwa kuya kufuneka ayingqine. Kwaye ngenxa yoko into yokuqala kukubaleka.
ukuthula kwaseberlin - Afrika Vazquez Beltran
UAfrika Vázquez Beltrán ukwabizwa ngokuba yi-Afrika Ruth kwaye wazalelwa eZaragoza ngo-1990. Upapashe inoveli yakhe yokuqala eneminyaka elishumi elinesixhenxe kwaye namhlanje sele ekhona amashumi amabini ananye ahlelwe phakathi kweSpain neMexico. Udlale zonke iindidi ulutsha kunye noncwadi lwabantu abadala. Ngoku unikezela ngesihloko esitsha apho aya khona eBerlin ngowe-1938 Ann Weigel ngumfazi osemncinci utitshala aria ogxothiweyo kwisikolo asebenza kuso aze athathe umsebenzi njengo umphathi endlwini ka Hoffmann, abazali bakhe baqhawula ubuhlobo naye emva konyulo olwenze uHitler oyingqonyela. Ngelixa uzama ukufundisa uLouise omncinci kunye noKristin ovukelayo malunga nemfundiso yeNazi Party, uAnn uya kujongana nobunzima. ukuhlangana kwakhona nabahlobo bakhe bakudala ebuntwaneni: UBerthold, ngoku oyindoda kaFührer, kwaye Igorha, abagulayo, abangahloneliyo kwaye oko kubonisa yonke into eyenziwa ngamaNazi.
Iindlalifa zeMvumi -UAna Lena Rivera
Isihloko sokugqibela esikhethiweyo, nesiphuma ekupheleni kwenyanga, sindichukumisa kakhulu kuba ndiyamazi umbhali walo—naye. wayengumbhali kule blog-Y Ndibe nethamsanqa lokuyifunda kwakusavuthwa. Ke ngoku ndingenza isincomo sam ngawo wonke umthetho.
Sinebali elibaliswayo ngamaxesha amaninzi abalinganiswa zezinye usapho olunye lwase-Asturian kwaye apho umatshini wokuthunga ogcina imfihlo ngezo zine izizukulwana. Eyokuqala yayi Aurora, owanyanzeleka ukuba asebenze e mina emva kwengozi kayise waza wafunga ukuba uza kwenza nantoni na ukuze aphume kweso sihogo. Ngokutshata nokungena emtshatweni ongenaluthando, ufumana njengoko isipho somtshato a Singer okwesibini, kubalulekile ukuqala ukuqhubela phambili ngenye indlela. Kodwa a isiganeko esoyikekayo iya kwenza iMvumi ekuphela kobungqina besoyikiso esiya kumkhathaza ubomi bakhe bonke. Ukutyhubela iminyaka i-Aurora iya kwabelana a ubunzima okhethekileyo kunye nomzukulwana wakhe oyintombi uAlba kwaye imfihlelo iya kugqiba ukubhaqwa.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Iincwadi » EyoMdumba. Ukukhethwa kwezinto ezintsha